Masada, safar taariikhda galay | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Israa'iil, Maxaa la arkaa
Markii aan yaraa waxaa jiray taxane TV oo caan ah oo la yiraahdo Masada, Riwaayad taariikhi ah oo ay la jilayaan xiddigo xilligan jira sida Peter O'Toole, Peter Strauss iyo Barbara Carrera. Waxay ahayd markaa markaan maqlay magaca Masada iyo sheekada tan qalcaddii lamadegaanka Yahuudah ee reer binu Israa'iil.
Maanta burburka, weyn oo wali haybad leh, ayaa sameeya Beerta Qaranka Masada y wiil Dhaxalka Aduunka, sidaa darteed haddii maalin uun aad booqato reer binu Israa’iil kama dayi kartid jidka aad ku jirto.
2 Dalxiiska Masada
Burburka ayaa ka kooban iyo daaraha waaweyn iyo dhufaysyada laga dhisay buur ku taal lamadegaanka Yahuudah, oo u dhow Badda Dhimatay, ee maanta loo yaqaan Israel. Taxanaha telefishanka ee aad kor ku tilmaantay wuxuu inoo sheegayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee dagaalkii u dhaxeeyay Yuhuudda iyo Roomaaniyiinta, oo taariikhda loo yiqiin Kacdoonkii Yuhuudda Weyn. Dadkii Yuhuudda ayaa halkaan gabaad ka dhigtay oo Roomaankuna meeshii buu hareereeyey waxayna si adag u hareereeyeen ilaa ay maxaabiistu doorteen inay si wada jir ah u dilaan.
Sidaa awgeed Masada waa wax u dhigma qarannimada Yuhuudda iyo xaqiijinta dad ahaan. Laga soo bilaabo 1966 aagga oo dhan wuxuu ahaa Beerta Qaranka, illaa 1983 waxay ka mid ahayd keydkii dabiiciga ee Yuhuudda laga soo bilaabo 2001 waa goob taariikhi ah sida ay sheegtay UNESCO.
Dhulka ay Masada ku taal waa qayb ka mid ah dhallin yaro badan oo tectonic ah, oo aan lahayn nabaad-guur badan, qaab aan caadi ahayn laakiin aad ugu eg Ahraamta bilaa dhibic. Plateau wuxuu cabirayaa qiyaastii 645 mitir oo dherer ah 315 balac ah, wadar ahaan aagag dhan 9 hektar Dhinaca bariga waxaa ku yaal buuro dhaadheer oo dhererkoodu yahay 400 mitir, dhinaca kalena waxay gaarayaan boqol mitir. Marka, marin-u-helka xagga sare ayaa adag.
In kasta oo hadhaagii degsiimooyinkii hore la helay, haddana sida uu sheegayo taariikhyahan Flavio Josefo qalcaddii waxaa dhisay boqorkii Hasmonean Alexander Janneo oo daah-furkii qaar ka mid ah qadaadiicdii iyo duudduubkii xilligaas waxay muujinayaan in fikraddu khalad ahayn. Laakiin taariikhda naga daneyneysa Masada waa dambe oo waxay dhacdaa xilligii qabsashadii Yahuudiya ee Pompey.
Boqorka Halyeeyada, oo caan ku ahaa, halkaan ayuu degenaa xubno ka tirsan qoyskiisa halka uu u safray Rome si uu u codsado xoojin si loo xakameeyo gobolka. Qalcadda ayaa markaa ka hor istaagtay go'doomin culus oo ay ku hayeen Parthians, oo kaliya roob mucjiso ah ayaa ka badbaadiyay inay ku dhacaan, maadaama ay ka dhammaadeen biyo. Dhanka kale, Rome, Herodos wuxuu kasbaday taageeradii uu doonayay wuuna soo noqday sidii Boqorka Yahuudiya waxyarna tartiib ayuu uqabsaday gobolka, aakhirkiina wuxuu sababay in Yeruusaalem ay dhacdo.
Laakiin iyagu waxay ahaayeen waqtiyo dhib badan: oo uu taageeray Mark Antony Cleopatra VII ayaa ballaariyay boqortooyadeeda, markaa Herodos wuxuu xoojiyay Masada isagoo u malaynaya inuu maalin uun u baahan doono meel xoogaa aan laga gudbi karin. Toddobaatan sano dhimashadiisa ka dib, ayaa dagaalkii ugu horreeyay ee Yuhuudda - Dagaalkii Roomaanka mar haddii xiisaddu ahayd ku jira crescendo. Koox Yuhuud xagjir ah ayaa ka shaqaysay kacdoonka, kuwa kale ayaa ku biiray sidaasna aakhirkii koox Copó Masada oo dilay ciidankii Rome halkaas dhigay.
Sannadaha soo socda aaggu wuxuu ahaa volcano waxaana Masada loo aqoonsaday inay tahay goob khaasatan amar la'aan. Kadib Roomaaniyiintii ayaa tallaabo ka qaaday arrinta waxayna go’aansadeen inay laayaan qaxootiga Yuhuudda ah ee halkaas jooga oo ku xeeran xeryo ciidan oo fara badan. Taliyuhu wuxuu qorsheeyay wax walba oo faahfaahsan, isagoo diirada saaraya inuu ka soo galo marinka loo maro jiiraha galbeedka. Ka dib markii uu isku dayay inuu ku guuleysto inuu ka jabiyo darbiyada, wuxuu go'aansaday inuu dhiso sagxad taasoo dhowr toddobaad kadib gaadhay 100 mitir oo dherer ah.
Ka dib toddobo bilood oo go'doomin ah Jiingadda waa la dhammaystiray oo munaarad 30-mitir sare leh oo birta lagu xoojiyay ah ayaa laga dhisay xagga sare. Halkaan ayaa Roomaanku shaqada ka ceyriyeen oo wankii derbiga siinayay ayaa shaqeeyay. Muddo ka dib Roomaanku waxay ogaadeen in Yuhuuddu dhistay mid ka adag gidaarka gadaashiisa, sidaa darteed way joojiyeen weeraradii oo waxay gubeen dhismahaas.
Yuhuuddii ku jirtay gudaha Masada dhibaato ayaa ku jirtay waxayna go'aansadeen inay isdilaan: nimanku waxay dileen qoyskiisa ka dibna waxay doorteen toban si ay isu dilaan. Sidaas ayeyna ahayd ilaa uu ka haray hal nin oo keliya, oo keligiis keligiis jooga ayaa dab qabadsiiyey qalcaddii Markay ugu dambaynti Rooma galeen, waxay heleen xabaal.
Laakiin goorma ayaa Masada ay heleen khubarada qadiimiga ah? Waxay ahayd bilowgii Qarnigii XNUMXaad, sanadkii 1838 si gaar ah. Wixii intaa ka dambeeyay aaggu wuxuu noqday mid aad u xiiso badan wax walbana waa la qoday oo khariidad laga sameeyay. Qodis weyn oo qadiimiga ah ayaa dhacday 60-yadii.
Maxaa lagu arki karaa Masada? El dhismaha galbeedka Waxaa laga heli karaa Carad, marin 3199. Halkan waxaad ku arki doontaa dib u dhiska mashiinada Roomaanka laga bilaabo goobta illaa Masada, the romanka roman fuuliddiisu ay ku lug leedahay inta udhaxeysa 15 ilaa 20 daqiiqo markii la fuulo, the ceelasha waqooyiga qadiimiga ah laga qoday buurta iyo, qiimo gaar ah, teendhada ayaad ku seexan kartaa. sidoo kale waxaa jira a iftiinka iyo codka habeenkii amphitheater.
Buurta dusheeda waxaa ku yaal burburka Qasriga Woqooyi, waxa ka hadhay qasriga sedexda gole ee khaaska ah ee Herodos oo leh dabaq iyo muraajooyin dib loo dhisay, burburkii macbudka kaliya ee haray laga soo bilaabo wakhtigii Macbadka Labaad, qolka laga helay magacyada dhamaan dadka wax ku dhuftay, kooxdii ugu badnayd ee yahuuda ee ku xirnaa Masada intii uu socday kacdoonka, a kaniisada byzantine oo ay dhiseen wadaaddada suufiyada sidoo kale dabaqyada mosaiciga ah, the Qasriga reer galbeedka, aad u weyn oo waliba shukaansi laga soo bilaabo waqtigii Herodos, the maydhashada roman, qolalka taliyaha oo leh muraayadaha iyo ceelka koonfureed, meel aad u weyn oo buurta hoosteeda ah.
Ka soo galitaanka Badda Dhimatay, wadada 90, mid ayaa laga soo galayaa iridda bari halkaasoo ay ku taal a dukaanka hadiyadaha, xarun gargaar deg deg ah, a makhaayad iyo maqaaxi.
Sidoo kale halkan waa kan Matxafka Masada Yigal Yadin, oo la furay 2007, oo bixisa khibrad sheeko ah oo ku saabsan dhacdooyinka ku xeeran qalcadda, siiyana wanaagsan background booqashada, ah marin biyoodka kaasoo ku geeya albaabka Wadada abeesada, tan ugu adag, oo hadda lagu dabooli karo lug, oo ku lug leh saacad iyo badh hoos.
Booqashadu runtii waa wax cajiib ah. Laga yaabaa in aad ballanso galitaanka Masada Qaranka Xadiiqadda internetka, iyada oo loo marayo bogga rasmiga ah, xulashada taariikhda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Masada, safarka taariikhda